CRIU, sistemu iji chekwaa ma weghachite steeti nhazi na Linux | Site na Linux
CRIU (Ntughari ma weghachi na Userspace) bụ ngwá ọrụ na-enye gị ohere ịchekwa ala nke otu ma ọ bụ otu nhazi wee maliteghachi ọrụ site na ọnọdụ echekwara, ọbụlagodi mgbe ịmalitegharịrị usoro ahụ ma ọ bụ ihe nkesa ọzọ na-enweghị imebi njikọ njikọ netwọl.
Jiri ngwa ọrụ a, enwere ike ifriizi ngwa na-agba ọsọ (ma ọ bụ akụkụ ya) ma tinye ya na nchekwa na-adịgide adịgide dị ka nchịkọta faịlụ. Enwere ike iji faịlị ndị ahụ wee weghachite ma mee ngwa ahụ site na ebe ọ kpọnwụrụ.
Ihe pụrụ iche nke oru CRIU bu na a na-etinye ya n'ọrụ na oghere onye ọrụ, karịa na kernel.
1 Banyere CRIU
2 Banyere ụdị ọhụrụ nke CRIU 3.15
3 Etu esi etinye CRIU na Linux?
Ngwaọrụ CRIU a na-emepe emepe dị ka akụkụ nke ọrụ OpenVZ, na ebumnuche nke imebi ebe nlele / weghachite na kernel.
Ọ bụ ezie na isi ha na-elekwasị anya bụ ịkwado Mbugharị akpa, na-enye ndị ọrụ ohere ka ha nyochaa ma weghachite ọnọdụ dị ugbu a nke usoro ọrụ na usoro otu.
Ugbu a, enwere ike iji ya rụọ ọrụ na sistemụ x86-64 na ARM y na-akwado ọrụ ndị a:
Usoro: nchịkwa ha, PID, onye ọrụ na ndị nyocha otu (UID, GID, SID, wdg), ikike sistemụ, eri, na ịgba ọsọ ma kwusi steeti
Ngwa nchekwa: ebe nchekwa na ebe nchekwa ma chekwaa ebe nchekwa
Ọkpọkọ na FIFOs
Unix ngalaba ntọala
Ihe ntanetị, tinyere ntọala TCP na steeti ESTABLISHED
Sistemụ V IPC
Kernel na-akpọ usoro a kapịrị ọnụ: inotify, signalfd, eventfdyepoll
N'etiti ngwa ngwa nke teknụzụ CRIU, a chọpụtara na sistemụ na-amalitegharị na-enweghị ịkwụsị usoro nke usoro a na-adị ogologo oge, igbe dịpụrụ adịpụ na-ebugharị mbugharị, na-agba ọsọ ọsọ nke usoro nwayọ (nwere ike ịmalite site na steeti echekwara mgbe ebidoro ya), na-eme mmelite kernel na-ebuteghị ọrụ ọzọ, na-echekwa oge ọrụ ga-adị ogologo oge iji maliteghachi ọrụ ma ọ bụrụ na mberede , Ikike nhazi gafee nchịkọta ọnụ, usoro abụọ na igwe ọzọ (ngalaba na mpaghara dịpụrụ adịpụ), mepụta ọnyà nke ngwa onye ọrụ n'oge ọrụ maka nyocha na sistemụ ọzọ ma ọ bụ ọ bụrụ na ịchọrọ ịkagbu omume ndị ọzọ na mmemme. A na-eji CRIU na sistemụ njikwa akpa dịka OpenVZ, LXC / LXD, na Docker.
Banyere ụdị ọhụrụ nke CRIU 3.15
Ugbu a ngwá ọrụ dị na ụdị ya 3.15, nke eweputara n'oge na-adịbeghị anya na ọ na-ewebata ọrụ criu-image-streamer, nke na-enye ohere ịnyefe ihe oyiyi usoro site na / na CRIUs n'oge arụmọrụ / weghachite ọrụ.
Enwere ike ibufe foto site na nchekwa dị na mpụga (S3, GCS, wdg) na-enweghị nchekwa na sistemụ mpaghara mpaghara.
A gbakwunyere nkwado maka ụlọ MIPS.
Ekwe ka ifriizi usoro adịghị nke dị PID namespace, na-esote site na weghachi ka dị PID namespace.
Agbakwunyere usoro ndị ọzọ iji nyochaa faịlụ.
Agbakwunyere nkwado maka ịjụ oyi na iweghachi usoro BPF BPF_HASH_OF_MAPS na BPF_ARRAY_OF_MAPS.
Agbakwunyere nkwado mbụ maka ụdị nke cgroup nke abụọ.
Etu esi etinye CRIU na Linux?
Maka ndị nwere mmasị ịwụnye ngwa ọrụ a, ha kwesịrị ịma na ọ dị n'ime ọwa gọọmentị nke ọtụtụ nkesa Linux.
Ya mere iji wụnye ngwá ọrụ naanị mepee ọnụ na enyemaka nke njikwa ngwugwu gị maka ngwa ma ọ bụ jiri otu n'ime iwu ndị a anyị kesara.
Maka ndị bụ Debian, ndị ọrụ Ubuntu na nkwekọrịta nke abụọ ndị a:
Ọ bụ maka ndị bụ ndị ọrụ Arch Linux na ihe omuma obula ya:
N'ihe banyere ndị bụ ndị ọrụ nke emepe:
Finalmente maka ndị chọrọ ikpokọta ngwa ọrụ ahụ ha nwere ike ime ya site na ịpị:
Ọ bụrụ na ị chọrọ ịmatakwu banyere ya banyere ngwá ọrụ a, ị nwere ike ịlele nkọwa Na njikọ na-esonụ.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Site na Linux » GNU / Linux » CRIU, sistemu iji chekwaa ma weghachite ọnọdụ nke usoro na Linux
Ubuntu aka OTA-14 rutere na ngwaike nkwado ngwaike na ndị ọzọ